Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay bandhigga liita ee Jadon Sancho – Gool FM - Idman news
Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay bandhigga liita ee Jadon Sancho – Gool FM
(Manchester) 19 Sebt 2021. Macallinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa aaminsan in Jadon Sancho uu leeyahay tayada Red Devils uu ugu noqon karo Weeraryahan sare, inkastoo uu si hoose ku bilowday noloshiisa Old Trafford.
Solskjaer ayaa aaminsan in Sancho uu noqon doono xiddig sare muddada 15-ka sano ah ee soo aaddan, isla markaana uu haatan baranayo horyaalka Premier League iyo inuu horumariyo xirfaddiisa ciyaareed.
Isagoo la hadlay Saxaafadda ka hor kulanka galabta ee Premier League oo ay Manchester United booqanayso West Ham United ayuu macallin Solskjaer yiri: “Wakhtiga oo dhan wax ayuu baranayaa.
“Sida aan tababarka ugu sheegay, waxa uu baranayaa habkeenna, waxa uu baranayaa Premier League, dabcan wuu yaqaannaa Champions League, waxa uu bartay intii uu ku sugnaa Dortmund.
“Waa wiil yar, kaliya waa 21-sano jir, waana uu horumari doonaa, waxaan la soo saxiixannay inagoo u aragna inuu noqon doono Weeraryahan sare 10, 12 illaa 15 sano ee soo aaddan, maskaxdeydana waxba kama beddelin.
“Kubbad haysashada aad buu ugu wanaagsan yahay, waana uu u dabacsan yahay inuu wax barto, waana wax weyn marka aad timaado Man Utd.
“Mar walba waxa aad doonaysaa inaad hesho fursad, isla markaana aad la ciyaarto qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan Adduunka, waxaadna heleysaa laylin cajiib ah oo aad ka heleyso macallimiintii aan ka helay oo kale.” Ayuu hadalkiisa ku daray Macallin Ole.
Man United ayaa xidigan garabka ka ciyaara kala soo saxiixatay Kooxda Borussia Dortmund, waxaana uu qalinka ugu duugay heshiis shan sanadood ah markii ay kula soo wareegeen 73 milyan oo gini suuqii xagaaga.
Previous Goolhaye Edouard Mendy oo sharraxay sirta ka dambeysa bandhiggiisa wacan ee Kooxda Chelsea – Gool FM
Next Weeraryahanka Kooxda Liverpool ee Sadio Mane oo rikoor taariikhi ah ka sameeyey horyaalka Premier League – Gool FM